कोरोनाको संक्रमण भएको भनेर अस्पतालाले भर्ना लिएन: अस्पताल चार्दा चार्दै मृ’त्यु
छपकैयाकी २० वर्षकी युवती विष्णु लामालाई साउन २१ गतेदेखी ज्वरो आईरहेको थियो । औषधी खाएपछि ज्वरो निको भयो तर, शुक्रबार साँझ एक्कासी श्वासप्रश्वास सम्वन्धि समस्या देखियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको र ज्वरो समेत आएपछि परिवारका सदस्यले उनलाई विरगन्जको एडभान्स अस्पताल लगे ।
यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ। अस्पतालको ढोकामा पु¥याएपछि उनको लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो देखियो । त्यसपछि अस्पतालले आईसीयू खाली नभएको भन्दै अर्को अस्पताल लैजान भन्यो । ईरिक्सामा रहेकी बिरामीलाई लिएर उनका परिवार गण्डकस्थित बयोधा अस्पताल पुगे ।
बयोधा अस्पतालका डाक्टरहरुले ‘कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीको यहाँ चेकजाँच हुन नसक्ने’ भनेर फर्काएको लामाका भिनाजु रुपेश सिंहले बताए । । बयोधा अस्पतालबाट विरामी लामालाई तराई अस्पतालमा पु¥याइयो । त्यहा पुग्दासम्म उनको अवस्था निक्कै गम्भिर बन्दै गईरहेको थियो ।
रिपोर्ट भएमात्र उपचार गर्ने नभए नगर्ने बताएका थिए । धेरै भनसुनपछि अन्तत उनलाई रातको समयमा गण्डक कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरियो । विरामीको अधिकाशं समय अस्पतालको ढोका ढोकामा घुम्दैमा वित्यो । त्यस बेलासम्म उनको अवस्था निक्कै जटिल बनेको थियो ।
एक बच्चाकी आमा समेत रहेकी लामाले राति २ बजेर १२ मिनेटमा संसार त्यागिन् । कोभिड विशेष अस्पताल गण्डकका कोअर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंहले समयमा उपचार हुन नपाएका कारण उनको मृ-त्यु भएको बताए । ‘चार–पाँच दिनदेखि ज्वरो, रुघाखोकीले सिकिस्त बनेकी ती महिलालाई उपचारको लागि समयमा अस्पताल नल्याइएको र
सिकिस्त भएपछि उपचारको लागि एउटा अस्पतालदेखि अर्को अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै समयमा उपचार हुन नपाई मृ-त्यु भएको हो’, डा. सिंहले भने । मृतक युवतीका श्रीमान विदेशमा छन् । उनी चार वर्षे बच्चासहित छपकैयामा डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन् । गण्डक अस्पतालले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि मृतक लामाको स्वाब संकलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोशालामा पठाइएको छ ।
Prevराहतको नाममा कुहिएको चामल बाँढियो
Nextउपत्यकामा हजार संक्रमित, काठमाडौं सहित ६ जिल्ला ‘रेड जोन’ मा !